Olee otú ịgbanwe ma ọ bụ Tọgharia gị Discord Paswọdu - Comp Comparison】
Esi gbanwee ma ọ bụ tọgharịa paswọọdụ Discord gị
Mkparịta ụka bụ ozi izizi na ngwa VoIP karịrị ndị ọrụ 250 nde. Ọ bụ otu nkata nkata ikpo okwu ezubere maka gamers, ma ugbu a ọ ghọọ a n'ozuzu nzube n'elu ikpo okwu maka ụdị ọ bụla nke obodo.
Ọ bụ ezie na ngwanrọ ahụ n'onwe ya bụ n'efu, enwere ọtụtụ ndenye aha na nhọrọ ịhazi ahazi, ị nwere ike ijikọ kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ akaụntụ PayPal na Discord. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ịgbanwee paswọọdụ Discord gị ka ndị ọrụ na-enwetaghị ikike ghara ịnweta akaụntụ gị mgbe niile iji zụta ihe ị na-achọghị.
Ọtụtụ atụmatụ na ntọala nke nghọta nwere ike ịba ụba maka ndị ọrụ ọhụụ, yabụ na ntuziaka a, anyị ekpuchila usoro ziri ezi iji gbanwee okwuntughe gị. Ọ bụrụ na i chefuola paswọọdụ gị kpamkpam, anyị akọwapụtakwala usoro iji tọgharịa ya ka ị nwee ike ịnweta akaụntụ Discord gị ọzọ.
Pịa na obere cogwheel na ala aka ekpe nke ihuenyo (Image akwụmụgwọ: Discord)
Esi gbanwee paswọọdụ Discord gị
Nzọụkwụ ịgbanwe paswọọdụ gị site na ngwa ngwa Windows Discord na site na interface web discord.com bụ otu. Usoro ahụ mara mma nke ukwuu na ngwa mkpanaka, mana interface ahụ dịtụ iche.
Na Discord, pịa cogwheel na-esote aha njirimara gị na avatar iji mepee mkparịta ụka ntọala.
Pịa bọtịnụ acha anụnụ anụnụ iji malite idezi nkọwapụta akaụntụ njirimara gị (Ebe E Si Nweta Foto: Discord)
Ga-ahụ ndepụta dị ogologo nke edemede. Ọ ga-abụrịrị ndabara na Akaụntụ M, yabụ pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ.
Họrọ Gbanwee okwuntughe iji kpughee uzo ntinye okwuntughe ozo (Ebe E Si Nweta Foto: Discord)
Ebe ị ga-ahụ aha njirimara Discord gị na adreesị ozi-e ugbu a. Pịa Gbanwee okwuntughe.
Tinye paswọọdụ ochie gị na paswọọdụ ọhụrụ tupu ịpị Chekwa (Ebe E Si Nweta Foto: Discord)
Ugbu a, a ga-enwe igbe ndenye maka paswọọdụ gị ugbu a na paswọọdụ ọhụrụ ịchọrọ iji.
Tinye paswọọdụ gị ugbu a ma họrọ paswọọdụ ọhụrụ. Mgbe afọ juru gị na nhọrọ gị, pịa Chekwa. Ugbu a emelitere paswọọdụ gị na Discord, yabụ ị ga-abanye ọzọ na ngwaọrụ ndị ọzọ ọ bụrụ na Discord meghere.
Pịa Chefuru paswọọdụ gị? ịmalite usoro reboot (Ebe E Si Nweta Foto: Discord)
Esi tọgharịa paswọọdụ Discord gị
Ọ bụrụ n’ichefula paswọọdụ Discord gị, ịnwere ike ịnweta ncheta na nbanye peeji. Tinye adreesị email gị ka ọ na-adị na mbụ, mana kama ịbanye paswọọdụ gị, pịa Chefuru paswọọdụ gị?
Esemokwu ga-ezitere gị email yana njikọ iji tọgharịa paswọọdụ gị. Mgbe ị pịrị na njikọ ahụ, a ga-akpọrọ gị gaa na ibe weebụ Discord na otu ntinye ntinye ntinye ka ị banye paswọọdụ ọhụrụ ahọpụtara gị.
Tinye paswọọdụ ọhụrụ gị ma pịa Gbanwee okwuntughe. A ga-ebute gị gaa na nsụgharị weebụ nke Discord ma a ga-emelite paswọọdụ gị. Nwere ike iji paswọọdụ ọhụrụ gị banye na desktọọpụ Discord na ngwa ngwa.